विश्वसन्देश साप्ताहिकले चितवनको दुर्गम गाउँ कान्दामा अध्ययनरत ८ वर्षीय हरिलाल प्रजालाई वार्षिक ५० हजार छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । लक्ष्मी प्रतिष्ठानद्वारा अति सीमान्तकृत गरिब चेपाङ बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच गराई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले न्यूयोर्कबाट प्रकाशित विश्वसन्देशले सहयोग गरेको हो ।
अमेरिकामा विगत दुई वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको ‘नेपाल डे परेड’सम्बन्धी विवाद चुलिएको छ । विगत दुई वर्षदेखि न्यूयोर्कमा सम्पन्न गरिएको परेडको हिसाब–किताब हालसम्म बुझाउन नसकेको आरोप एकातिर छ भने अर्कोतिर आगामी मे महिनामा गरिने भनिएको परेड कसको नेतृत्वमा हुने भन्ने पनि अन्यौल नै छ ।
च्याम्वरको व्यवसायिक अन्तरक्रिया
नेपलिज अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्शले फ्रेन्चाईज शैलीको व्यवसाय बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आइतवार च्याम्वरले टेक्ससको डलासमा गरेको कार्यक्रममा फ्रेन्चचाईज व्यवसायमा लामो समय देखि लागेकी सरा वास्कोले सहजीकरण गरेकि थिइन् ।
नेपालीको जनघनत्व बढेसगैं विभिन्न व्यवसायमा नेपालीको उपस्थिति समेत बढिरहदा विश्वमा फैलिदैं गएको फ्रेन्चचाईज वारे नेपाली व्यवसायीलाई जानकारी गराउन कार्यक्रम गरिएको महासचिव बाल जोशीले जानकारी दिए ।
लायन्सको तिलाठी र इटहरीमा स्वास्थ्य शिविर
लायन्स इन्टरनेशनल डिष्ट्रिक्ट फोर सी थ्रि तथा अमेरिकाको कैलाश फाउन्डेशनको संयुक्त आयोजनामा नेपालको सुनसरी र सप्तरीमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरिएको छ ।
सप्तरीको तिलाठी र सुनसरीको इटहरीमा स्वास्थ्य शिविर गरिएको हो । अत्याधुनिक उपचार उपकरण सहीत अमेरिकाबाटैं पुगेको चिकित्सक सहीतको टोलीले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको थियो । तिलाठीमा ३ दिन र इटहरीमा ३ दिन आयोजना गरिएको स्वास्थ्य शिविरमा विभिन्न रोगका विरामीले स्वास्थ्य परिक्षण गराएका थिए । लायन्स डिष्ट्रिक्ट गर्भनर राजेन थापाको पहलमा यहाको डिष्ट्रिक्टले नेपालमा स्वास्थ्य शिविर संचालन गरेको हो ।
नया वर्षमा विविध कार्यक्रम
नेपाली नया वर्षको अवसर पारेर विभिन्न स्थानमा नेपाली संघ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी नया वषलाई स्वागत गरेका छन् ।
नेपाली समाज टेक्ससले ग्रान्डपेरीमा न्यू इयर मेला तथा सांस्कृतिक साझ सम्पन्न गरेको छ । ग्रान्डपेरीको लोनस्टार पार्कमा गरेको मेलामा फिरोज स्यांगदेन एण्ड ब्यान्ड, सज्जन राज बैद्य, विमल डागी मगर र संगिता थापा मगरको प्रस्तुती रहेको थियो । उता, नर्थ डलास नेपाली समाज तथा हाम्रो नेपाली समाजले नया वर्षमा शुभकामा आदान प्रदान कार्यक्रम गरेको छ । त्यस्तै, ग्रेटर अस्टिन नेपाली सोसाइटीले वनभोज तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरी नया वर्षको स्वागत गरेको छ ।
डलासमा मे मा युएनए सम्मेलन
अमेरिकाको टेक्सस डलासमा आउदो महिना मे महिनाको २६ र २७ मा तेस्रो युएनए सम्मेलन हुने भएको छ ।
विएन पन्त र महेन्द्र पौडेल सह अध्यक्ष रहेको सम्मेलन सम्पन्न गर्न निरज पन्तको संयोजकत्वमा मुल समिति बनाइएको छ ।
यस्तै, निमा शेर्पा र कमल कडायत खेलकुद समिति संयोजक, सकर विनोद विष्ट र नविन अधिकारी सकर खेल संयोजक, जेभिस गुरुगं बास्केटवल खेल संयोजक, अंगेल शेर्पा भलिवल खेल संयोजक, रायन रेयस इभेन्ट कोर्डिनेटर, आयशा ओझा र श्रद्धा श्रेष्ठ सांस्कृतिक संयोजक, अमित शर्मा आर्थिक संयोजक, जुनियर ढकाल संचार संयोजक, पवन योन्जन न्यूयोर्क राज्य संयोजक तथा सन्देश पाण्डे र सुधिर क्षेत्रीलाई आइटी कोर्डिनेटरको जिम्मेवारी दिइएको छ । युनाइटेड नेपलिज एशोसिएशनको आयोजना तथा नेपाली समाज टेक्सस र गैर आवासीय नेपाली संघ, अमेरिका टेक्सस च्याप्टरको सहकार्यमा हुने सम्मेलनका क्रममा विभिन्न विषयमा गोष्ठी, सेमिनार तथा मनोरञ्जनात्मक र प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम गरिने संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष पासागं लामाले जानकारी दिए ।
नेपालमा प्रवासी नेपालीको लगानी तथा प्रवासमै नेपालीको लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसबारे सम्मेलनका क्रममा विशेष छलफल गरिने बताउदैं लामाले सामुहिक लगानीका अवधारणा बारे विशेषज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने जनाए ।
अमेरिकामा रहेका व्यवसायीहरुलाई जमघट गराउने योजना रहेको बताउदैं लामाले सम्मेलनका क्रममा वालबालिकाका लागि मनोरञ्जनात्मक तथा प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम तथा भलिवल,फुटवल, बास्केटबल लगायतका खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रर्दशनीको कार्यक्रम राखिएको आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।
सम्मेलनमा गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निवर्तमान अध्यक्ष शेष घले, जमुना गुरुगं, अर्विगं सिटिका मेयर रिक स्टोफोर लगायत आउने पक्का भैसकेको बताइएको छ । यस्तै, प्रख्यात ज्योतिष हरी हर अधिकारी, कलाकार एलिशा राई लगायतको सहभागिता रहने पक्का भएको आयोजकले जनाएका छन् ।
डलासमा बृहत रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना
अमेरिकाको टेक्सस अर्विगमा वृहत्त रत्त संकलन कार्यक्रम गरिने भएको छ । अप्रिल २९ आइतवार ब्लड डोनर्स अफ अमेरिकाको टेक्सस स्टेट च्याप्टरले तेस्रो पटक वृहत्त रक्त संकलन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । नेपाली समाज टेक्सस लगायत डलास फोटवर्थ वरपर रहेका नेपाली संघ संस्थासग समन्वयमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा १ सय प्वाइन्ट बढी रक्त संकलन गर्ने लक्ष्य आयोजकले लिएको छ ।
सबैंका लागि रक्तदान, आफ्नै लागि रक्तदान अभियान सहीत रक्तदान मार्फत अमेरिकामा सामाजिक सेवामा नेपालीहरुले ब्लड डोनर्स अफ अमेरिका संस्थामार्फत सक्रियता बढाएका छन् । अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा राज्य कमिटि मार्फत संस्थाले रक्त संकलन कार्यलाई अगाडि वढाइरहेको छ ।
संस्थाको टेक्ससको च्याप्टरले टेक्ससका विभिन्न स्थानमा गरी दर्जनौं पटक रक्तसंकलनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । तेस्रो पटक बृहत रक्तदानको आयोजना गरेको संस्थाले यसअघि पहिलो वृहत्त रक्तदान कार्यक्रममा १ सय २८ र दोस्रो पटक ९० प्वाइन्ट रक्त संकलन गरेको थियो । टेक्ससमा महिला पुरुष गरी झण्डै ३ सय जनाले रक्तदान गरिसकेको बताउदैं टेक्सस च्याप्टर संयोजक शिव काफ्लेले दर्जन भन्दा बढी रक्तदान गर्नेको संख्या समेत दर्जन बढी रहेको जनाए ।
रक्तदान पुण्यको काम मात्र नभई आफ्नै लागि समेत जरुरी रहेको बताउदैं काफ्लेले नेपालीहरुको सक्रियता यसमा रहन सक्दा यहाको समाजमा समेत फरक परिचय स्थापित गर्न सकिने बताए ।
इशानीको बालखेल उद्यान बनाउने अभियान
कलाकार लगायत सेलिब्रेटीहरु सामाजिक सेवामा सक्रिय भैरहदा पूर्व मिस नेपाल इशानी श्रेष्ठले नेपालका सय स्थानमा बाल खेल उद्यान बनाउन अभियान सुरु गर्ने भएकि छन् ।
बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि खेल उद्यानको समेत आवश्यकता महशुष गरी आफूले सो अभियान सुरु गर्न लागेको श्रेष्ठले बताइन् ।
नेपालको विभिन्न ठाउमा घुम्दा सामान्य खालको चिप्लिटी,पिगं जस्ता खेल सामाग्री समेत नभएको अवस्था देखेपछि मलाई यसतर्फ लाग्न मन लागेको हो । शुक्रवार डलासमा बिश्व न्यूजसग कुराकानी गर्दै सन् २०१३ को मिस नेपाल श्रेष्ठले भनिन् कमसेकम सामान्य भएपनि केही खेल्ने सामाग्री सहीत वाल खेल उद्यान बनाउन सकिन्छ भनेर अभियान सुरु गर्न लागेकी छु ।
श्रेष्ठले यसका लागि झण्डैं ५० देखि ६० हजार डलर खर्च लाग्ने र सबैंको साथ सहयोग रहे ३ वर्ष भित्र अभियान सफल हुने अनुमान गरेकि छन् ।
देश विदेशवाट सहयोग उठाउने सोचेकी छु । मेरो अभियानलाई मैले बुझाउन सके त्यो संभव पनि हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । उनले भनिन् हुनत अहिले नेपालको कर्पोरेट सेक्टरमा समेत सोसल रेस्पोन्सिविलिटी बढेको पाइएको छ, यसले पनि सहयोग पुग्छ होला ।
यो अभियान अन्र्तगत देशका विभिन्न क्षेत्रमा गरी स्थानहरु छान्ने र छान्ने जिम्मा स्थानीय समुदायलाई नै दिने र समुदायलाई सक्रिय बनाएर निर्माण सम्पन्न गर्ने श्रेष्ठले बताइन् ।
मिस नेपाल भए देखिनैं सामाजिक सेवामा सक्रिय श्रेष्ठले महिला स्तन क्यान्सर सम्बन्धी सचेतना जगाउने तथा देशका विभिन्न ठाउमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर हरु संचालन गर्दै आएकि छन् ।
डलासमा न्यू इयर साझ
नया वर्षको अवसरमा नेपाली समाज टेक्ससले शनिवार सांस्कृतिक कार्यक्रमसहीत न्यू इयर मेला गर्ने भएको छ । डलास ग्रान्डपेरीको लोनस्टार पार्कमा गर्ने मेलामा फिरोज स्यांगदेन एण्ड ब्यान्ड, सज्जन राज बैद्य, विमल डागी मगर र संगिता थापा मगरको प्रस्तुती रहने छ ।
वालवालिकाको समेत मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम समावेश गरिएको कार्यक्रममा पूर्व मिस नेपाल इशानी श्रेष्ठको समेत सहभागिता रहने आयोजकले जनाएका छन् ।
अधिवेशन गराउन पहल गर्छु– डिना उपाध्याय
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डिना उपाध्यायले नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकामा छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन गराउने सबैको चाहना भएकाले आफूले सक्दो पहल गर्ने बताइन् ।
अध्यक्ष पौडेलद्वारा एनआरएनए आइडी कार्ड हस्तान्तरण
गैरआवासीय नेपाली संघ, अमेरिकाका अध्यक्ष डा. केशव पौडेलले न्यूयोर्क र न्यूजर्सी च्याप्टरका अध्यक्षलाई एनआरएनए परिचयपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । न्यूयोर्कस्थित शेर्पा किदुगको सभाकक्षमा आइतबार एनआरएनए, न्यूयोर्क च्याप्टरद्वारा आयोजित एक अन्तरक्रियामा हालै छापिएका एनआरएनए परिचयपत्र हस्तान्तरण गरिएको हो ।
लायन्सको सचेतनामुलक पदयात्रा
टेक्ससको अर्विगंमा डलास एभरेष्ट लायन्स क्लबले किड्नी रोगबारे सचेतना जगाउने उद्देश्यले पदयात्रा गरेको छ ।
नेपाली समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको डलास फोर्टवर्थ क्षेत्रमा स्थापित नेपालीहरुको संलग्नतामा स्थापित लायन्स क्लबले किड्नी वाक २०१८ नाम दिएर पदयात्रा गरेको हो ।
डलास फोर्ट वर्थमा रहेका नेपालीका दर्जन बढी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको पदयात्रामा अर्विगं सिटीका मेयर रिक स्टोफोर, लायन्स डिष्ट्रिक्ट टु एक्स वनका गर्भनर हेनरी ह्वाइट, सेकेन्ड भाइस डिष्ट्रिक्ट गर्भनर विनोद माथोर, फिलिपिनो लायन्स क्लब प्रेसिडेन्ड ग्लोरिया माथोर, लायन्स डिष्ट्रिक्ट जोन सिक्स चेयर पर्सन टेरी मेजा लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
सो अवसरमा धारणा राख्दैं अर्विगं मेयर रिक स्टोपफरले नेपाली समुदायको सामाजिक सेवामा सक्रियताको प्रशंसा गर्दै किड्नी रोगको बारेमा चेतना जगाउन कार्यक्रम फलदायी रहेको बताए ।
त्यस्तैं, लायन्स डिष्ट्रिक्ट गर्भनर हेनरी ह्वाइटले सामाजिक सेवामा सक्रिय डलास लायन्स क्लबले सुरु गरेको किड्नी वाकलाई डिष्ट्रिक्ट तहसम्म लगिने बताएका थिए ।
मृगौला स्वास्थ्य राख्नका लागि के के गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख गरिएका प्ले कार्ड सहीत गरिएको पदयात्रामा मृगौला रोगीहरुलाई सहयोग गर्न आर्थिक सहयोग समेत संकलन गरिएको थियो ।
सन् २००३ मा स्थापित डलास एभरेष्ट लायन्स क्लबले टेक्ससको डलास फोटवर्थ क्षेत्रआसपास तथा नेपालमा समेत सामाजिक काममा सक्रियता देखाउदैं आएको छ । नेपालमा आरोग्य फाउन्डेशनसग मिलेर निशुल्क किड्नी रोगीको लागि डायलासिस सेवा दिने केन्द्र स्थापनामा क्लबले सहयोग गर्ने कार्यक्रमका संयोजक तथा क्लबका प्रथम उपाध्यक्ष थलराज पन्तले जानकारी दिए ।
क्लबका अध्यक्ष विएन पन्तको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा ब्लड डोनर्स एशोसिएशन अफ अमेरिकाका अध्यक्ष डा. नन्द रेग्मी, नेपाली समाज टेक्ससका अध्यक्ष सुमन थापा, प्रभात दिक्षित लगायतले किड्नी रोगको बारेमा धारणा राखेका थिए ।
एनएसटीले अंग्रेजी भाषा कक्षा चलाउने
नेपाली समाज टेक्सस(एनएसटी)ले आधारभुत अंग्रेजी भाषा कक्षा तथा अमेरिकी न्ँँगरिकता लिने तयारीमा रहेकाहरुलाई लक्षित गरी त्यसका लागि समेत प्रश्नोत्तर तयारी कक्षा संचालन गर्ने भएको छ ।
अप्रिल २२ वाट अंग्रेजी भाषाको ज्ञान नहुदा अमेरिकामा पर्ने समस्यालाई ख्याल गरेर आधारभुत रुपको अंग्रेजी कक्षा तथा यहाको नागरिकता लिनका लागि सोधिने प्रश्नहरु तथा आवश्यक तयारीमा केन्द्रीत रहेर कक्षा संचालन गर्न लागिएको समाजका सदस्य प्रयास बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो ।
उत्कृष्ट हुने यात्रामा डा. धरेल
क्यानडाको टोरोन्टोमा बस्दै आएका डा. तुल्सी धरेल क्यानडाको क्यानाडियन इमाइग्रेन्ट संस्थाले छनोट गर्ने उत्कृष्ट २५ इमाइग्रेन्टको सूचीमा छानिएका छन् । नेपालमा समेत प्राध्यापन पेशामा संलग्न डा. धरेल सन् २००० मा क्यानडा आएका थिए । उनी क्यानडामा आएर पनि प्राध्यापन क्षेत्रमा संलग्न रहेका थिए ।
ग्राहकलाई क्वालिटी सर्भिस दिन्छु– चन्दा थापा
११ वर्षअघि कानुन व्यवसायी चन्दा थापाले काम सुरु गर्दा न्यूयोर्कमा महिला वकिल नै थिएनन् । एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कानुनी अभ्यास गर्ने महिलाहरु कमै छन् । लामो समय अहोरात्र खटिएर ग्राहकसँग प्रत्यक्ष ‘डिल’ गर्दागर्दै निकै हिम्मत बटुलेकी उनले भर्खरै मात्र म्यानहाटनको ३४ स्ट्रिटमा आफ्नै कार्यालय ‘ल अफिस अफ चन्दा थापा’ खोलेकी छिन् ।
न्यूयोर्कमा शम्भुजितको सांगीतिक प्रस्तुति
नेपालका चर्चित संगीतकार तथा गायक शम्भुजित बास्कोटाले न्यूयोर्कमा सांगीतिक प्रस्तुति दिएका छन् । युएस नेपालद्वारा आयोजित सांगीतिक साँझमा संगीतकार बास्कोटाले मनोहर सुनाम र गायिका सपनाश्रीका साथ लाइभ प्रस्तुती दिएका हुन् । उनलाई गितारमा शिशिर श्रेष्ठले साथ दिएका थिए ।
नया वर्षमा न्यू इयर कप
नया बर्ष २०७५ को अवसरमा डलासमा रहेको डिएफडब्लु हिमालयज फुटवल क्लबले सेभेन ए साइड मैत्रीपुर्ण फुटवल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । नयावर्षको अवसरमा क्लबले आयोजना गर्दै आएको न्यू इयर कपको को तेस्रो संस्करण अप्रिल ८ मा ग्रेपभाइनमा हुने क्लबले जनाएको छ । मिडोमेरी सकर मैदान ग्रेपभाइनमा गरिने प्रतियोगितामा डलास फोटवर्थ क्षेत्रवर पर रहेका विभिन्न क्लबहरुले प्रतिष्पर्धा गर्ने बताइएको छ । मार्च ३१ सम्म क्लब दर्ता गरिसक्नुपर्ने जनाउदैं क्लबले दर्ता शुल्क ३ सय ५० डलर राखेको जनाएको छ । प्रथम हुने टोलीलाई १५ सय नगद र दोस्रो हुने टोलीलाई ७ सय नगद सहीत ट्रफी पुरस्कार राखिएको प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडीलाई समेत पुरस्कृत गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
अमेरिकाको डलास फोटवर्थ क्षेत्रमा सक्रिय डलास गोर्खाज फुटवल क्लबले सकर फर किड्स अर्थात बच्चाका लागि फुटवल नारा सहीत किड्स समर क्याम्प २०१८ को तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । बच्चाहरुको विद्यालयमा लामो विदा हुने समय पारेर क्लबले बर्षेनी सकर फर किड्स नारासहीत समर क्याम्प गर्दै आएको छ ।
टीपीएस नवीकरण– सम्बन्धित निकायसम्म पुगेन दबाब
टीपीएस नवीकरणका लागि अभियान चलाइएको झण्डै वर्षदिन हुन लाग्यो । तर, अझै पनि सम्बन्धित निकायसम्म दबाब पुग्न सकेन । अमेरिकामा कागजविहीन बसिरहेका नेपालीका लागि अध्यागमनसम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस)’को समय अवधि सकिनै लाग्दा पनि सम्बन्धित निकायसम्म दबाब नपुगेको सूचना आएको हो ।
अमेरिकामा विज्ञ सम्मेलनको तयारी
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको सानफ्रान्सिस्कोमा गैर आवासीय नेपालीबीच विज्ञ सम्मेलन हुने भएको छ । गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् र गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको संयुक्त पहलमा जुन १५ र १६ मा भेला हुने भएको हो । अमेरिका क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर गर्न लागिएको सम्मेलनमा उत्तर र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरुमा रहेका विभिन्न पेशा, व्यवसाय, क्षेत्रमा संलग्न प्राध्यापक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, इन्जिनियर, राजनितिमा सक्रिय रहेका, उद्योगी, व्यवसायीहरु उपस्थिति रहने गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिका क्षेत्रका संयोजक गौरी राज जोशीले जनाए ।
डलासमा किड्नी वाक हुने
अमेरिकाको डलासमा रहेको डलास एभरेष्ट लायन्स क्लबले डलासमा किड्नी रोगबारे जनचेतना जगाउने उद्देश्यले किड्नी वाक २०१८ गर्ने भएको छ ।
अप्रिल ८ मा अर्विगंको टिडब्लु रिचर्डसनपार्कमा गरिने कार्यक्रममा लायन्स डिष्ट्रिक्ट टुएक्स वनका गर्भनर हेनरी ह्वाईटले त्यसको नेतृत्व गर्ने आयोजक डलास एभरेष्ट लायन्स क्लबले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य परिक्षण शिविर सम्पन्न
नेपाली समाज टेक्ससले अमेरिकाको अर्विगंमा स्वास्थ्य परिक्षण शिविर सम्पन्न गरेको छ । प्रत्येक तीन महिनाको फरकमा नेपालीलाई लक्षित गरी समाजले स्वास्थ्य परिक्षण शिविर संचालन गर्दै आएको छ । आइतवार भएको पछिल्लो शिविरमा ७० जना विरामीले सेवा लिएको समाजका स्वास्थ्य क्षेत्र संयोजक दिनेश शर्माले जनाए ।